RMA Group of Companies နှင့် Capital Automotive တို့မှ Inya Covid Center မှရှေ့တန်းတိုက်ပွဲဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များကို ထောက်ပံကူညီအားဖြည့် – TodayZ
RMA Group of Companies နှင့် Capital Automotive ကုမ္မဏီတို့သည် Inya Covid Center ရှိ ဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း င်များ ဆေးပညာရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် လူနာများကို US Dollar ၁၇,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိသည့် အစားအသောက်များ၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာ၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် သီးသန့် ဖယ်ရီဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 နှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသောအားဖြင့် RMA group of Companies နှင့် Capital Automotive တို့သည်အောက်ပါ အလှူများကို Inya Covid Center တွင် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၁. Capital Automotive နှင့် Avis Myanmar တို့မှ ဆရာဝန်များ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း င်များ နှင့် ဆေးပညာရှင်များ အတွက် သီးသန့်ဖယ်ရီ ဝန်ဆောင်မှု ဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
၂. Advantage Trade Co., Ltd. မှ Karcher cleaning equipment သန့်ရှင်းရေး ကရိယာများကိုလည်း လှူဒါန်း ခဲ့ပါသည်။
၃. Comin Asia မှ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း ပေါင်းချောင် ကိုလှူ ဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၄. Express Food Group (Myanmar) Limited မှလည်း Swensen’s နှင့်The Pizza Company တို့၏ ရေခဲမုန့် နှင့် ပီဇာများ အခမဲ့ စားသုံးနိုင်သော Gift Voucher 500 cards ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
RMA Group Myanmar ၏ Country Manager ဖြစ်သူ Mr. Max Talcott မှ လည်း “RMA Group ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 နဲ့ရင်ဆိုင်ရာ မှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို အကူအညီပေးတာအပါအဝင် နိုင်ငံတွင်း ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရန် အတွက်လည်း အလွန်စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္မဏီများဖြစ်တဲ့ Avis, Express Food Group, Capital Automotive, Advantage Trade Co., Ltd နှင့် Comin Asia တို့ရဲ့ Inya Covid Center ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း သူရဲကောင်း များနှင့် လူနာများ အတွက် လှူဒါန်းရခြင်းကို အထူးဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ကူညီရတာလည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် Inya Lake Hotel ဝန်းအတွင်းရှိ Yangon Convention Center တွင် တည်ရှိသော Inya Covid Center သည် လူနာများကို ကုသပေးနိုင်သည့် ကုတင်၅၀၀ ပါရှိပြီး အရေးပေါ်လူနာ ၁၆ယောက်ကို လည်းကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူနာများကို ကုသပေးနိုင်ရန် ဆေးဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၄၀၀ ခန့် ကအဆိုပါ center တွင် ကူညီလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။
ဦးဝေဖြိုးဉာဏ် (Inya Covid Center စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့) မှလည်း “အခုလိုမျိုး Inya Covid Center ကို RMA Group of Companies များမှ အစားအသောက်များ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် ကူညီထောက်ပံအားဖြည့်မှုများကို အထူး ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါတယ် ။ ယခုလှူဒါန်းခဲ့သော အစားအသောက်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးဖြန်း ကိရိယာများ နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံးက ဝန်ထမ်းများနှင့် လူနာများ၏လိုအပ်ချက်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လလယ်မှစပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ တိုးမြင့်ခဲ့ပြီး အတည်ပြုလူနာများ သိသိသာသာ များပြားလာခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် အရ အတည်ပြုလူနာအရေအတွက် ၄၇,၆၆၆ဦးနှင့်နှင့် သေဆုံးလူနာ ၁,၁၄၇ ဦး ရှိခဲ့ပါသည်။
Watch “မိမိအစားအသောက်ထဲကအနည်းငယ်ကိုပြန်မျှဝေပေးပါ။” on YouTube